India dia mila fampidirana ny indostrian'ny Fizahan-tany ambanivohitra, fizahan-tany momba ny fitsaboana ary ny indostria MICE
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India dia mila fampidirana ny indostrian'ny Fizahan-tany ambanivohitra, fizahan-tany momba ny fitsaboana ary ny indostria MICE
Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny minisiteran'ny fizahantany any India dia manana tanjona lehibe indrindra hampiroboroboana sy hanamorana ny fizahan-tany na ho an'ny anatiny na ny eto an-toerana.
Ny fanitarana ireo fotodrafitrasa fizahan-tany, fiantohana ny fahatsoran'ny dia, ny fampiroboroboana ny vokatra fizahan-tany ary ny toerana itodiana dia iray amin'ireo ifantohana.
Ny minisiteran'ny fizahantany dia nanaiky faritra manokana 3 ho an'ny mety lehibe ananany - fizahan-tany ambanivohitra, fizahan-tany ara-pitsaboana ary ny indostria MICE.
Niasa am-pahavitrihana tamin'ny fampiroboroboana sy ny fampandrosoana ireo faritra fizahan-tany ireo izy ireo.
Ny fampahafantarana, ny fanasamihafa, ny fampandrosoana ary ny fampiroboroboana ireo vokatra fizahan-tany any amin'ny firenena dia fandraisana andraikitra avy amin'ny Ministera handresy ny lafiny 'vanim-potoana' ary hampiroborobo an'i India ho 365 andro hahatongavan'ireo mpizahatany manana fahalianana manokana ary hiantohana famerenana mitsidika ireo vokatra tsy manam-paharoa izay misy tombony azo oharina amin'ny India.
Ny minisiteran'ny fizahantany dia namolavola drafitra nasionaly drafitra sy sori-dàlana ho fampandrosoana ny ambanivohitra Tourism ao India - Fandraisana andraikitra mankany Atmanirbhar Bharat. Natosiky ny fanahin'ny "Vocal ho an'ny eo an-toerana", ny fizahan-tany any ambanivohitra dia afaka mandray anjara betsaka amin'ny iraka ataon'i Atmanirbhar Bharat.
Ny fizahan-tany ara-pahasalamana (antsoina koa hoe fitsangatsanganana ara-pitsaboana, fizahan-tany ara-pahasalamana na fitsaboana ara-pahasalamana manerantany) dia teny iray ilazana ny fomba fanao mitombo haingana amin'ny fitetezana sisintany iraisampirenena hahazoana fitsaboana. Ny serivisy tadiavin'ny mpitsangatsangana matetika dia misy ny fomba fifidianana ary koa ny fandidiana manokana misy pitsaboana toy ny fanoloana (lohalika / valahana), fandidiana fo, fandidiana nify ary fandidiana kosmetika. Saingy, saika ny karazana fitsaboana rehetra, ao anatin'izany ny fitsaboana aretin-tsaina, ny fitsaboana hafa, ary ny fikolokoloana volo dia misy any India. Ireo mpamily fototra amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ara-pahasalamana sy fizahan-tany dia ny fahafaha-miditra sy miditra amin'ny serivisy fitsaboana tsara, fanamorana ny serivisy fandraisam-bahiny, fotoana fiandrasana kely, fisian'ny teknolojia fitsaboana sy fanekena farany.